China Vapor Recovery Check Valve mveliso kunye nabenzi | Jiasheng
Ukubuyiswa kweValor yokujonga kwakhona iValve
Igama lebrand: JiaSheng
Inombolo yomzekelo: DN50, DN80, DN100
Ubushushu beMedia: Ubushushu obuqhelekileyo
Uxinzelelo: Uxinzelelo oluphakathi
Amandla: Incwadana yemigaqo
Ubungakanani bePort: 2 ', 3', 4 ″
Igama Product: Aluminium ingxubevange Flange yoMlilo Resistance Cap
1. Intshayelelo emfutshane yemveliso:
Umlilo ikepusi cap umnqwazi umnqwazi aluminium ipleyiti eliyinjubaqa, iqokobhe waphosa aluminiyam. Isiseko sokulungisa umlilo yibhodi yentsimbi engenazintsimbi kunye neplate yealuminium engqinelana neemfuno zetekhnoloji ye-CB-5908-2005. Xa ukwandiswa kwetanki yezinto okanye kwioyile, okt ngomlilo oxhathisa isiseko sebhodi ebunjiweyo ngaphandle kweemoto. Xa itanki ifaka ioyile ekutsaleni itanki, kwaye uthintele kwaye uphelise wonke umlilo ovela etankini, qinisekisa ukhuseleko.
Ikepusi yokungenisa umoya kufuneka ifakwe nkqo kwitanki ephezulu, iqinisekisa uxinzelelo lwangaphakathi nolwangaphandle. Ukuqinisekisa ukhuseleko kwitanki nakwisikhululo segesi.
Ukujonga ukungena komoya kwindawo yokumelana nomlilo epleyitini yokungenisa umoya, ukuqinisekisa ukumelana nomlilo, nokungena komoya olungileyo. Ukukhulula izikrufu isiciko ikephefumla xa ulondolozo kunye iqhosha lemenyu esisigxina fire nekudodobalisa umlilo, ngokuthatha ngaphandle fire retardant engundoqo, khangela
Uhlobo loqhagamshelo: Flange
Igama: Ukhuselo loMlilo kwiCap
Ubukhulu: 2 "2.5" 3 "
Izinto zomzimba: IAluminiyam
Umgangatho okanye ongagungqiyo: Umgangatho
Supply Amandla: 30000 Piece / Pieces Inyanga nganye
Iinkcukacha Packaging: Standard Carton Box Okanye Njengoko Iimfuno Abathengi '
Izibuko: Shanghai / Lianyungang
Ixesha Lead: ngenqanawa kwiintsuku ezili-15 emva kokuba intlawulo
Isiseko sokulungisa umlilo sivalekile, ukushenxiswa okanye ukubola, kufuneka sicoce ngokukhawuleza okanye sibuyisele indawo esisiseko yomlilo, itshekhi yenyanga kabini.
Igama lemveliso: Flame Arrestor Relief ukumelana Cap
Materia: Umzimba: i-aluminium alloy / intsimbi engenasici
Ubukhulu: I-DN50, iDN80, iDN100
Uhlobo loxhulumaniso: Esisangqa
Imidiya: Ipetroli, iparafini, idizili, Amanzi, njl
Singumvelisi, Sithengisa iimveliso ngokuthe ngqo kubathengi endaweni yokungena phakathi kwabantu.Sigcina i-evry penny yakho.
Ngolawulo lweqela lobuchwephesha kwinkqubo yemveliso, qinisekisa umgangatho ophezulu.
3.Uyilo kunye neMveliso.
Ukuba ukwimfuno ezizodwa, thumela nje iphepha loyilo okanye ipharamitha yeemveliso, siya kuyila siyenzele yona.
Kuba siyifektri enendawo yokugcina enkulu, sineemveliso ezininzi esitolo.
ngexesha elifanelekileyo nangempumelelo.
Egqithileyo I-Fuel Tanker yoXinzelelo lweValve eKhuselekileyo
Okulandelayo: Yenziwe ngentsimbi eshayinayo Valve
Ukugqithisa i-valve yokuphefumla umlilo
I-Fuel Tanker yoXinzelelo lweValve eKhuselekileyo
Inkcazo yemveliso Ifakiwe kumphezulu wetrakhi yetanki, kunye noxinzelelo lwengxamiseko umsebenzi wokunceda. Ukuba uxinzelelo ngaphakathi kweoyile lunokuphakama kunoxinzelelo olulinganisiweyo, ivelufa iya kuvula ikhuphe uxinzelelo lwangaphakathi. Uhlobo lweParameter yobuGcisa obuPhambili boMgangatho woBunzima boMsebenzi Uhlobo loXinzelelo lweJSVB 304/316 -20 ℃ ~ + 150 ℃ 0.05Mpa ~ 0.4Mpa Flange
Umqhubi woLawulo lweValve esezantsi
Iinkcukacha ezikhawulezayo zoMgangatho okanye oNgagunyaziswanga: Ulwakhiwo oluqhelekileyo: Uxinzelelo lwencwadana: Ubushushu obuqhelekileyo bobushushu beMedia: Izinto: Ubushushu obuqhelekileyo beMedia: Ubungakanani beoyile yePort: Indawo yokuQala: China (Mainland) Iinkonzo zethu 1) .Ixabiso leFactory ngqo, ukhuphiswano ngakumbi, zonke iintlobo Ukubumba okufumanekayo, izixhobo ezihambelanayo ezibonelelweyo. 2) .ngowomzi-mveliso wethu, ulawulo olungqongqo kuwo onke amanqanaba emveliso, ulawulo olungcono kumgangatho kunye nexesha lokuhambisa
Weld Ingqiniba 90 Degree